अक्षर साधनाको गोधूलि जीवन- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
अंगुरबाबा जोशीको व्यक्तित्व अन्तर्मुखी र बहिर्मुखी दुवै थियो ।
असार १३, २०७७ अभि सुवेदी
अंगुरबाबा जोशी ३१ जेठ २०७७ मा दिवंगत भइन् भन्ने समाचार सुनेपछि समय र शिक्षाको एउटा गोधूलि चित्र मेरो आँखासामु आयो । अंगुरबाबा जोशी (१९८९–२०७७) को अवसानको खबर सुनेर जीवनका आधी शताब्दी त्रिभुवन विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा तहमा प्राध्यापन गरेको म स्तब्ध भएँ । मैले उनलाई धेरै नजिकबाट चिनेको र उनले नेतृत्व गरेको र उनले निर्माण गरेको पद्मकन्या कलेज भवनमा शिक्षकको नियुक्ति लिएर पढाउन गएको व्यक्ति पनि होइन ।
तर, मेरो शिक्षक जीवन उनकै कलेजबाट आरम्भ गरेको मानिस भने हुँ । तर, अंगुरबाबा जोशी दिवंगत भएपछि उनका अनेकौं जीवनहरूमध्ये शिक्षासेवी अवतार म र मजस्तै शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरूका निम्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भएको कुरा बुझ्न गाह्रो छैन । अंगुरबाबा जोशीले आफ्नो सबभन्दा पछिल्लो कृति ‘साधना र गोधूलि जीवन’ (२०७४) शीर्षक आत्मकथामा सुरुमा नै यस्ता शब्दहरू लेखेकी छन्—
‘जीवनमा धेरै कुराको चिन्ता गरियो । सङ्घर्षका क्षणमा कहिलेकाहीं आँसु पनि झारियो । गर्न लागेका काममा आलोचक बन्धुहरूले तगारो हाल्न खोज्दा त्यसलाई मिलाउन चिन्ता पनि गर्नुपर्‍यो । तर, अहिले यस उमेरमा आइपुग्दा निजी जीवनमा मलाई कुनै कुराको चिन्ता छैन, सन्तोषैसन्तोष छ । तथापि एउटा कुराको चिन्ताले भने मलाई पलपलमा दु:खित बनाइरहेको छ । त्यो हो— मेरी प्यारी नेपाल आमा र दीनदु:खी नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूले दु:ख पाएको टुलुटुलु हेरेर बस्न पर्नु । समुन्नत नेपाल देखेर मर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने आकाङ्क्षा लिएर हिँड्नेलाई यो अवस्था देख्ता अत्यन्त गहिरो पीडाबोध हुँदो रहेछ ।’
अंगुरबाबा जोशीका अन्तिम सपना के थिए त्यो भन्न सकिँदैन । ती सायद कल्याणकारी, किञ्चित सुन्दर परिकल्पनाले रञ्जित र केही युटोपियाली किसिमका पक्कै थिए । तिनका आध्यात्मिक आलम्बनहरू पनि थिए । तर, उनको विषयमा केही शब्दहरू लेख्न बस्ता मेरा निम्ति उनको शिक्षासम्बन्धी चिन्ता र कर्म नै महत्त्वपूर्ण भएर आउँछन् । उनले देखेको संसार, उनले शक्ति र उपलब्धि, सपना र यथार्थका द्वन्द्वको जुन सामना गरिन् त्यसमा हाम्रा फरक अनुभव र मत अवश्य होलान्, तर विगत साठी वर्षदेखि यताको नेपाली उच्च शिक्षाका अनुभव हामी धेरै जनाका उस्तै हुन् । अंगुरबाबा जोशीले त्यो द्वन्द्वलाई, ती विरोधाभासहरूलाई सामना गर्ने एउटा जीवनशैली मात्र होइन, विचारको पद्धति पनि रचना गरिन् । त्यो प्रयोगात्मक र वैचारिक थियो, अनि थियो व्यक्तिका सम्बन्धमा आधारित रचना । यसका निम्ति अंगुरबाबा जोशीले राजादेखि रङ्कसम्मका नरनारीका सम्बन्धको फराकिलो कलेवर तयार पार्नु परेको कुरा आफ्ना किताब र रचनाहरूमा लेखेकी छन् । यस्ता सम्बन्धको प्रयोग उनले शिक्षासेवाकै निम्ति गरेको कुरा आज आएर प्रस्ट हुँदै छ ।
सत्ताइस सालतिरको कुरा हो । मैले त्रिवि अंग्रेजी विभागबाट एमए पास गरेपछि गर्न चाहेको कर्म कलेजमा अंग्रेजी पढाउनु मात्र थियो । ‘पद्मकन्या कलेजमा अंग्रेजी प्राध्यापन गर्ने तेजरत्न कंसाकार हाम्रो केन्द्रीय अंग्रेजी विभागमा पढाउन आउँदै छन्, उनको ठाउँमा तिमी गएर पढाऊ । प्रिन्सिपलसँग कुरा गरिहाल’, विभागका त्यो बेलाका अध्यक्ष एडिनबरा विश्वविद्यालयका ब्रिटिस डा. एलन डेभिसले भने । मनमा धेरै द्वन्द्व थिए । पहिलो त कन्याहरू मात्रै भएको कलेज लाज लाग्नेछ, कसरी पढाउँछु होला भन्ने थियो । दोस्रो, अंगुरबाबा जोशीसँग कस्ता कुरा गर्ने होला भेटेर भन्ने थियो । मैले अंगुरबाबा जोशीको बारेमा निकै कुरा थाहा पाइसकेको थिएँ । म राजनैतिक र सामाजिक कुराहरूमा सचेष्ट र जानकार युवा थिएँ । अंगुरबाबा जोशीलाई राजा महेन्द्र र रानी रत्नसँग नजिकको सम्बन्ध भएकी एक निर्भीक र शिक्षासेवी महिलाको रूपमा जानेको थिएँ । तिनलाई पहिलोपटक भेट्न जाँदै थिएँ । बागबजारका पुराना, कुनै खास वैभव नदेखिने घरहरूको देव्रेपट्टि सधैं देखेको एउटा रङ्गीन विशाल भवन खुल्यो । त्यसको शिरमा सुनका गजुरहरू चम्किए । त्यसको वास्तुकला राणा शासकले पश्चिमी शैलीमा बनाएको त्रिचन्द्र कलेजको भवनसँग मिल्दैनथ्यो । पश्चिमी शैलीमै वीरशमशेरले १९५१ तिर बनाएको त्रिचन्द्र कलेजको घण्टाघर लगभग सुनसान कान्तिपुरीमा निकै हल्ला गरेर मिनेट र घण्टाहरूका हल्ला पोखिबस्थ्यो । यो पद्मकन्या कलेजको भवनले वास्तुकलाजनिन अर्कै शैली रोजेको थियो । त्यो चानचुन कुरा थिएन । त्यसको पछाडि अंगुरबाबा जोशीको मनको तरङ्ग मात्रै थिएन । त्यसमा उनको एक सचेत शिक्षा र स्वतन्त्रतासम्बन्धी धारणा पनि थियो ।
अंगुरबाबा जोशी बनारसबाट उच्च शिक्षा लिएर २०११ सालमा फर्केदेखि नै उनले पढाउन सुरु गरेको पद्मकन्या कलेज नै थियो । अनि त्यहींबाट अध्ययन–बिदा लिएर २०१४ मा उनी अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न गएको कथा चाखलाग्दो छ । अध्ययन सकेर फर्केपछि २०१८ सालमा अंगुरबाबा जोशी पद्मकन्या कलेजकी प्रिन्सिपल नियुक्त भएको कुरा नै अहिले आएर हेर्दा ऐतिहासिक भएको छ । उनी त्यहाँ १२ वर्ष प्रिन्सिपल भएर रहिन् । त्यो काल यस कलेजका निम्ति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थियो । अंगुरबाबा जोशीले बागबजारमा जग्गा फेला पारेर यो कलेज भवन बनाएको कुरा नै उनलाई सम्झिने मुख्य आधार हो । यो भवन तयार गरेर २०२६ भदौ ३ गते उद्घाटन गर्न आमन्त्रित महारानी रत्नसँगै आएका राजा महेन्द्रले ‘तपाईंले त सुनको गजुर बनाउनुभयो, मेरो त तामाको गजुर मात्रै छ’ भनेर हाँसेको सम्झना गरेकी छन् अंगुरबाबा जोशीले ।
गेटबाट छिरेपछि मैले कहिल्यै सामना नगरेको भीड देखें । गेरु रङको सारी लगाएका यति धेरै छात्रा एकै ठाउँमा मैले पहिले देखेको थिइनँ । म पनि एक प्रकारले छात्रै अवस्थामा त थिएँ । कवि तुलसी दिवस त्यहीं प्राध्यापन गर्थे । उनैसँग अंगुरबाबा जोशीलाई भेट्न प्रिन्सिपलको कक्षमा गएँ । ती जीवन्त, सरल र मानौँ कुनै काम हतारले गरिसक्नुपर्नेजस्तो जागरुकता लिएर बसेकी थिइन् । उनले मेरो विषयमा साधारण जानकारी लिएपछि भनिन्, ‘बा, खुसी लाग्यो । तपाईं पढाउन हाम्रोमा आउनुभएको १ तर, केही महिना हामी तलब दिन सक्तैनौँ । तीन–चार महिनापछि हामी तलब दिन्छौं ।’ मलाई तेजरत्न कंसाकारले कक्षामा परिचय गराउन लिएर गए । आईएको विशाल कक्षामा पस्दा म चकित परें । त्यति धेरै गेरुवस्त्र लाएका विद्यार्थी युवतीहरूको कक्षामा जमघट मैले अघि कहिल्यै देखेको थिइनँ । कंसाकार गएपछि मेरो र्‍यागिङ सुरु भयो । भर्‍याङमा बसेका छात्राहरूले बाटो छोडेनन् । लाग्यो, म धेरै लाज मान्दो रहेछु । त्यसैले गर्दा यस्तो हुँदो रहेछ । जेनतेन दुई–तीन महिना काटें । लोकसेवा आयोगबाट पाटन कलेजमा शिक्षक (प्राध्यापक भन्थे) को विज्ञापन खुल्यो, भिडें । म मात्रै पास भएँ । जानुअघि अंगुरबाबालाई भेट्न गएँ । र्‍यागिङ गर्ने छात्राहरूले यस्तो राम्रो शिक्षक गुमाउनु हुँदैन, जान दिनु हुँदैन भनेका रहेछन् । अंगुरबाबाले भनिन्, ‘केही छैन, म त्यो दरबन्दी यतै ल्याउँछु ।’ मैले सुनेको थिएँ, जोशीको पँहुचको विषयमा । म हातमा टोपी लिएर दौडिँदै पाटन कलेजका प्रिन्सिपल मंगलराज जोशीकोमा गएर भनेँ, ‘तपाईं राजज्योतिषी मान्छे । आफ्नो दरबन्दी, यसो हुन दिनु भएन ।’ मंगलराज सरले त्यही राजज्योतिषीको शक्ति प्रयोग गरेर मलाई निश्चिन्त पाटनमा नै ल्याए । विद्यार्थी राजनीति गरिसकेको हुनाले म यस्ता तारक युद्धहरू गराउन जान्दथें । त्यो कलाले मलाई बँचायो ।
मलाई एकल लैंगिक कलेज (‘सिङ्गल सेक्स कलेज’) मन पर्दैनन् । पछि ब्रिटेनमा पढ्न गएका बेला हिलरी क्यासमान भन्ने एक जना कवि साथीले भनिन्, उनले क्याम्ब्रिजभित्रको महिला कलेजबाट अंग्रेजीमा एमए गरेकी थिइन् । म चकित परें । उनले मलाई सन् १९७९ को अमूक महिनामा एकपटक क्याम्ब्रिजभित्रको न्युनम कन्या कलेजकी उनकी पहिलेकी विभागीय अध्यक्ष प्रा. सीता नरसिंहनको भित्रैको आवासमा लगिन् । मैले पद्मकन्या कलेज विषयमा नरसिंहनलाई भने । अंगुरबाबा जोशीको म एक प्रशंसक भएको तर एकल कलेज मन नपर्ने कुरा पनि भनें । उनले भनिन्, क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीमा केटीहरूले पढ्न पाउँदैनथे । त्यसैले कुनै मिस्टर न्युनमले यो कलेज खोलेका थिए । पछि मेरा विद्यार्थी विष्णु सापकोटा केम्ब्रिजमा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्न गएका बेला यी नरसिंहन र न्युनम कलेजको विषयमा पत्ता लगाएर लेख्नू भनेँ । विष्णुले लेखे, त्यहाँ न सीता नरसिंहन छिन्, न त न्युनम कलेज नै छ । अब छात्र र छात्राका एउटै कलेज हुन्छन् । म आज सम्झिन्छु, अंगुरबाबा जोशीले यहाँ कन्या कलेजलाई उच्चता दिएर प्रयोग गरेको कारण महत्त्वपूर्ण थियो । यो समाजमा अहिले पनि छात्राहरू, महिलाहरूलाई हेर्ने दृष्टिमा श्रेष्ठताको पुरुष अहम् ठूलो कारक छ । अंगुरबाबा जोशी त्यो मनोगत परिवेशबाट कन्याहरूलाई मुक्त पार्न चाहन्थिन् । उनीहरूका निम्ति एक आपैंmमा पूर्ण संस्था रचना गर्न चाहन्थिन् । उनी कति सफल भइन् समयले भन्छ । उनको चाहनाको गहिराइ बुझ्न उनले कल्पना गरेको यो कलेजको संरचना, उनले पढाउन राखेका विषयहरूका विविधता हेर्नुपर्छ ।
अंगुरबाबा जोशीको विषयमा एउटा छोटो लेखमा धेरै कुरा भन्न सकिँदैन । अन्त्यमा भन्नुपर्ने कुरा यस्ता छन् । अंगुरबाबा जोशीको व्यक्तित्व अन्तर्मुखी र बहिर्मुखी दुवै थियो । आफू ११ वर्षकी हुँदा १२ वर्षका बलराम जोशी उर्फ बलराम सरसँग बिहा भएदेखि शिक्षा, वैवाहिक जीवन, सन्तान, अनि फेरि अध्ययन, अनि फेरि सन्तान अनि शिक्षण, अनि दरबारसँग नजिकको सम्बन्ध भएकाले पञ्चायती कालका संवैधानिक नियुक्ति, अनि पछिल्लो समयमा समतामूलक कन्या शिक्षाका गार्गी गुरुकुलको स्थापना गर्ने उनका कर्महरूको समानान्तर आलम्बन भएको कुरालाई एउटी महिलाको यो समाजमा महायात्रा नै भन्नुपर्छ । उनको अन्तर्मुखी चेतनालाई उनका कथाहरू, उनका संस्मरणहरू उनका वैश्विक चेतनाजनिन लेख र किताबहरूबाट पनि देख्न सकिन्छ । अंगुरबाबालाई ११ वर्षको उमेरमा घरमा बुहारीको रूपमा स्वागत गरेकी १०६ वर्षकी उनकी सासू चन्द्रकुमारीले अलबिदा गरेको मार्मिक कथा जीवन र इतिहासको गोधूलि हो ।
बहुआयामिक अंगुरबाबा जोशीको अक्षर साधनाको गोधूलि यात्रालाई श्रद्धाञ्जली । प्रकाशित : असार १३, २०७७ १०:०६